Ifektri ye-155M | KwiChina Abenzi be155M, abaXhasi
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 20km DDM Simplex LC i-transceiver ebonakalayo
I-100Gb / s CFP4 yenzelwe i-100GBASE-SR4 Ethernet. Ziyathobelana ne-CFP4 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-SR4 kunye neCAUI-4, kunye ne-OIF CEI-28G-VSR .. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno ye-RoHS.
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 40km DDM Simplex LC i-transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ziyilo lwe-Ethernet ekhawulezayo, i-SDH / SONET, isicelo seWDM. Imodyuli ye-transceiver iyangqinelana ne-IEEE802.3Z kunye ne-SFF-8472. Iyahambelana nemfuno yeRoHS.
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 80km DDM Simplex LC i-transceiver ebonakalayo
155Mb / s SFP CWDM 80km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ziyilo lwe-SONET, i-SDH, nolunye usetyenziso lwee-Optical Links. Imodyuli ye-transceiver iyangqinelana ne-IEEE802.3Z kunye ne-SFF-8472. Iyahambelana nemfuno yeRoHS.
155Mbps SFP 1310nm 20km DDM Duplex LC transceiver enombala
Ii-transceivers ziyilo lwe-SONET, i-SDH kunye nolunye usetyenziso lweekhonkco ezibonakalayo. Imodyuli ye-transceiver iyahambelana ne-IEC60825-1 kunye ne-SFF-8472. Iyahambelana nemfuno yeRoHS.
I-155Mb / s SFP DWDM 80km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ziyilo lwe-Ethernet, iFiber Channel, isicelo seNethiwekhi ye-DWDM. Imodyuli ye-transceiver iyangqinelana ne-SFF-8472. Iyahambelana nemfuno yeRoHS
155Mbps SFP 1550nm 120km DDM engayi LC transceiver enombala
Ii-transceivers ziyilo lwe-SONET, i-SDH, i-Ethernet ekhawulezayo kunye nolunye usetyenziso lweekhonkco ezibonakalayo. Imodyuli ye-transceiver iyahambelana ne-IEC60825-1 kunye ne-SFF-8472. Iyahambelana nemfuno yeRoHS.
155Mbps SFP 1550nm 80km DDM engayi LC transceiver enombala
155Mbps SFP 1310nm 40km DDM engayi LC transceiver enombala